सप्पोरो! जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद doतुमा गर्न उत्तम चीजहरू - Best of Japan
जापान, सप्पोरो, होक्काइडो, मा पूर्व Hokkaido सरकारी कार्यालय को SapporView। जापानको जापानोमा जापानको होक्काइडो, जापानको पुरानो होक्काइडो सरकारी कार्यालयमा यात्रीले फोटो लिए
यस पृष्ठमा, म सिफारिश गरिएको टूरिस्ट स्पटहरू र के गर्ने जब तपाईं होक्काइडोको सप्पोरोमा यात्रा गर्नुहुन्छ। म बर्षमा सिफारिस गर्ने पर्यटक स्थलहरु बाहेक, म सिफारिस गरिएका स्पटहरु र वसन्त, ग्रीष्म, शरद winterतु र जाडोको प्रत्येक मौसममा के गर्ने भनेर बुझाउनेछु।
फेब्रुअरी जाडो पर्यटन को लागी हिउँद पर्यटन को लागी राम्रो मौसम हो, होक्काइडो को केन्द्रीय शहर साप्पोरो। "सप्पोरो स्नो फेस्टिवल" प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरीको सुरूदेखि लगभग days दिनको लागि आयोजित गरिन्छ। यस समयमा, दिनको उच्चतम तापमान पनि अक्सर फ्रिजबाट तल हुन्छ। यो चिसो छ, तर म पक्का छु ...
सप्पोरोमा गर्न उत्तम चीजहरू
जाडोमा सप्पोरोमा गर्ने उत्तम चीजहरू
वसन्तमा सप्पोरोमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू
गर्मीमा सप्पोरोमा गर्ने उत्तम चीजहरू
शरद Saतुमा सप्पोरोमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू
हिउँदको सपनाको दृश्य पहाडबाट साँझ = शटरस्टकमा
जेआर सप्पोरो स्टेशन। त्यहाँ एक लग्जरी होटेल "जेआर टावर होटेल निक्को सप्पोरो" सप्पोरोमा सब भन्दा राम्रो मध्ये एक स्टेशनको माथि छ। होटेल अतिथिहरूले प्राकृतिक तातो स्प्रि enjoyहरूको पनि मजा लिन सक्छन्
सप्पोरो जापानको largest वटा ठूला शहरहरू र उत्तरी टापु होक्काइडोको राजधानी हो। दुई सय भन्दा कम बर्षमा, सप्पोरोले केवल सात व्यक्तिको बसोबासबाट एउटा सम्पन्न महानगरमा द्रुत बृद्धि भएको छ। उत्तरी जापानका आदिवासीहरु ऐनुको भाषामा सप्पोरो शब्दको अर्थ समतलबाट बग्ने अत्यावश्यक नदी हो। आज साप्पोरो यसको खोला भन्दा धेरैको लागि चिनिन्छ। एक हिउँ चाड वार्षिक रूपमा आयोजित गरिन्छ, र सप्पोरो पनि यसको ramen र बियर को लागी प्रसिद्ध छ। ट्रेन द्वारा सप्पोरोको यात्रा पूर्ण रूपमा जापान रेल पास द्वारा कभर गरिएको छ।
उत्तर अमेरिका शैलीमा आधारित साप्पोरो यसको आयताकार सडक प्रणालीमा विशिष्ट छ। यस प्रणालीले तपाईंलाई साप्पोरोको कुशल सार्वजनिक यातायात विधिहरू प्रयोग गर्न कहाँ जान तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। Lines लाइनहरू सबै जेआर सप्पोरो स्टेशनको साथ जडान हुन्छन्। जतिसक्दो चाँडो तपाईं आफ्नो ट्रेन बाट निस्किनु भयो, तपाईं सबै कि द्वारा स्वागत छ साप्पोरो प्रस्ताव छ। स्टेशन आफैं T3 अवलोकन डेक होस्ट गर्दछ, र सपिपो रामेन रिपब्लिक जस्ता शपिंग मल्ल र विशिष्ट रेष्टुरेन्टहरू द्वारा समेटिएको छ। सप्पोरो हिउँ र जाडोको खेलहरूको लागि परिचित छ, र यदि त्यहाँ फेब्रुअरीमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं विशेष उपचारको लागि हुनुहुन्छ।
हप्ता लामो सप्पोरो युकी मत्सुरी, वा सप्पोरो हिउँ फेस्टिवल, बरफ र हिउँ मूर्तिकलाहरु लाई प्रस्तुत गर्दछ र दुई लाख आगन्तुकहरु लाई वार्षिक मा आकर्षित गर्दछ। ओडोरी सप्पोरोमा भ्रमणको लागि मात्र पार्क मात्र होइन। सप्पोरोको बीचमा, तपाईंले बोटानिक गार्डेन भेट्टाउनुहुनेछ, जसले क्षेत्रको मूल जंगलको केही अंश राख्दछ। वा, तपाई साप्पोरो बियर संग्रहालयलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ, होक्काइडोलाई जापानी बियरको जन्मस्थानको रूपमा मनाउँदै।
तल सप्पोरोको पर्यटन आकर्षणहरू छन् जुन म सिफारिस गर्न चाहन्छु। वर्षभरि तपाईं यी आकर्षणहरूको साथ रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस् उनीहरूको आधिकारिक वेबसाइट प्रदर्शन गर्न!
पूर्व होक्काइडो सरकारी कार्यालय भवन (रातो ईंट अफिस)
शरद Formerतु मा पूर्व सरकार। यो साप्पोरो, होक्काइडो = शटरस्टकको ल्यान्डमार्क हो
पूर्व होक्काइडो सरकारी कार्यालय भवन होक्काइडोको प्रतीक हो भनिन्छ। रातो ईट्टाको भवन १ 1888 मा निर्माण गरिएको थियो। यो भवन १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा शुरू भएको होक्काइडोको खेतीका लागि आधार भएको छ।
किनभने यो रातो ईट्टाले बनेको छ, यसलाई "रेड ईंट अफिस" पनि भनिन्छ।
यो भवन एक अमेरिकी नव-बारोक शैली ईंट संरचना हो, ईंटहरू, काठ, कडा ढु stone्गा आदि सडक उत्पादनहरू प्रयोग गर्दछ। टावरको माथिको उचाई m 33 मी। त्यसबेला यो जापानको सब भन्दा ठूलो भवन थियो। हाल यो देशबाट महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पत्तीको रूपमा तोकिएको छ।
भवनमा, होक्काइडो बस्तीका बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्रीहरू प्रदर्शित छन्। त्यहाँ ताकेशिरो मत्सुउराको कागजात पनि छ जसले होक्काइडो अन्वेषण गरी "होक्काइडो" नाम दिए। हलको भित्र विशाल होक्काइडो नक्शा (प्रतिकृति) टाकेशिरोले सिर्जना गरेको हो। त्यहाँ उनीहरु असंख्य स्थानहरु छन् जुन उनले ऐन जातिबाट सुनेका थिए। ऐन मानिसहरू होक्काइडोको स्थलाकृतिसँग परिचित छन् र आश्चर्यजनक रूपमा उनीहरूको नाम राखेका छन्।
भवनको अगाडिको चौरमा १,००० भन्दा बढी रूखहरू रोपिएका छन्। यी रूखहरूले वसन्त, गर्मी, गिरावट, र जाडो को संक्रमण मा सुन्दर दृश्य बनाउँछ। पूर्व होक्काइडो सरकारी कार्यालय भवन रातको बत्तीमा बल्छ।
किनकि यो भवन जेआर सप्पोरो स्टेशनबाट तुलनात्मक रूपमा नजिक छ, म प्राय: सबै चोटि म सफोरो जान्छु। यस भवनको आकर्षक पोइन्ट भवनको वरपरको सुन्दर वातावरण हो, ऐतिहासिक सामग्रीको शक्ति प्रदर्शन हुँदैन। गर्मी मा तपाईं विविध फूल र सागहरु द्वारा निको हुनेछ। जाडोमा, यो शुद्ध सेतो हिउँले ढाकिएको छ, तपाईं गम्भीर वातावरणले डोरनुहुनेछ।
नर्थ, वेस्ट, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
011-204-5019 (सप्ताह दिन)
011-204-5000 (सप्ताहन्त छुट्टी)
■ खुल्ने समय ／:: -8 45-१-18: ००
■ अन्तिम दिन ecDec.29- जान .3
Entrance प्रवेश शुल्क charge नि: शुल्क
सप्पोरो टिभी टावर
सप्पोरो टिभी टावरको दृश्य, सप्पोरो = शटरस्टक
सप्पोरो टिभी टावर ओडोरी पार्कको पूर्वी छेउमा अवस्थित छ, सप्पोरोको पर्यटक आकर्षण। यसको उचाई १147.2.२ मिटर छ। यो टोकियो स्काई रूख र टोकियो टावर भन्दा धेरै कम छ, तर यसको मनमोहक दृश्य सपोरोका नागरिकहरूले मन पराउँछन्।
टिभी टावर वेधशालाबाट, तपाईं पूरै सुन्दर ओडोरी पार्क देख्न सक्नुहुनेछ। तपाई टाढाका पहाडहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि यो धरहरा एक दर्शनीय स्थल हो जुन तपाईं साप्पोरोमा आउँदा एक पटक जानु पर्छ।
Odori Nishi 1-chome, Chuo-ku, सापोरो, Hokkaido, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ००-२२: ०० (खोल्ने समय थप घटनाहरूका कारण परिवर्तन हुन सक्छ)
■ अन्तिम दिन an जान .१
■ प्रवेश शुल्क ／ y२० येन (वयस्क), y०० येन (उच्च माध्यमिक विद्यार्थी), y०० येन (कनिष्ठ उच्च विद्यार्थी), y०० येन (प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थी), १०० येन (- - year वर्ष पुरानो)
जापानको सप्पोरो, होक्काइडो, जापानमा = सटरस्टकमा सप्पोरो टिभी टावरबाट ओडोरी पार्क हेर्दै
ओडोरी पार्क सप्पोरो शहरको बीचमा शहरको अग्रणी दर्शनीय स्थलहरू मध्ये एक हो। यो पार्क १०० मिटर चौडा छ। यो लगभग १. 100 किलोमिटर पूर्वदेखि पश्चिम सम्मको सडकको बिचमा अवस्थित छ।
यस पार्कमा अक्सर चाडपर्वहरू आयोजना गरिन्छ। प्रत्येक फेब्रुअरी, प्रसिद्ध सप्पोरो हिउँ महोत्सव आयोजित छ। जुलाईको मध्यदेखि अगस्टको मध्यसम्म, यस पार्कमा विशाल बियर बगैंचा देखा पर्‍यो। बोन ओडोरी (जापानी शैलीको नृत्य) को उत्सव अगस्तको मध्यमा आयोजित गरिएको छ। यदि तपाईं यस पार्कमा जानुहुन्छ भने, तपाईं जहिले पनि रमाईलो गर्न सक्नुहुनेछ।
हरेक चोटि म सप्पोरोमा जान, ओडोरी पार्क भ्रमण गर्ने चलन छ। गर्मी मा, म मेरो परिवार संग स्वादिष्ट आइसक्रीम संग सम्झना छ। जनवरीमा जब म त्यहाँ गएको थिएँ, तिनीहरू साप्पोरो हिउँ उत्सवको लागि तयारी गर्दै थिए र मलाई त्यो तयारी हेर्न रमाईलो लाग्यो।
Odori Nishi 1-chome ~ 12-chome, Chuo-ku, सापोरो, Hokkaido, जापान नक्सा
☎011-251-0438 (सूचना केन्द्र र आधिकारिक पसल)
■ खुल्ने समय ／ १०: ०-10-१-00: ०० (सूचना केन्द्र र आधिकारिक पसल)
सप्पोरो क्लक टावर
सप्पोरो = शटरस्टकमा स्पष्ट गर्मी दिनमा प्रतीकात्मक घडी टावर
सप्पोरो क्लक टावर सपोरोको प्रतीक हो। यदि तपाईं सप्पोरोको बारेमा दर्शनीय गाईडहरू देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले अवश्य पनि पहिले यस घडी टावरको तस्वीर हेर्नु पर्छ।
यो घडी टावर १ 1878 मा सप्पोरो कृषि कलेज (वर्तमान होक्काइडो विश्वविद्यालय) को व्यायामशालाको रूपमा निर्माण गरिएको थियो। तथापि, १ 1903 ०130 मा होक्काइडो विश्वविद्यालय हालको ठाउँमा सरेको थियो। त्यस समयमा क्लक टावर स्थानीय सरकारलाई बेचिन्थ्यो। क्लक टावर अहिले भन्दा १ XNUMX० मिटर जति पूर्वोत्तर थियो, तर यसलाई अहिलेको स्थानमा सारियो। त्यस पछि, यो लामो समयको लागि पुस्तकालयको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
यो घडी टावर काठको दुईवटा कथाले बनेको छ। अब यो चारैतिर ठूला भवनहरूद्वारा घेरिएको छ, त्यसैले यो धेरै देख्न सकिने छैन। यस कारणले केही पर्यटक निराश छन्। जे होस्, यदि तपाइँ तपाइँका साथीहरूलाई SNS पठाउनुहुन्छ, यो भवनको अगाडि तस्विर लिनु राम्रो हुन्छ। जे भए पनि, यो भवन सप्पोरोको प्रतीक हो। तपाईंको साथीले पक्कै बुझ्दछ कि तपाईं साप्पोरोमा हुनुहुन्छ!
उत्तर १, वेस्ट २, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: -8 45-१-17: १० (बन्द गर्नु अघि १० मिनेटसम्म प्रवेश)
■ अन्तिम दिन ／ जनवरी १-।
Entrance प्रवेश शुल्क ／ २०० येन (वयस्क), नि: शुल्क (हाईस्कूलमा भन्दा सानो)
Nijo बजार मा, तपाईं ताजा समुद्री खाना किन्न सक्नुहुन्छ। समुद्री खाना रेस्टुरेन्टहरू पनि छन्
निजो बजार एक बजार हो जसले लामो समयदेखि सप्पोरोका नागरिकहरूलाई ताजा समुद्री खाना उपलब्ध गराउँदछ। यो धेरै ठूलो छैन। हालसालै उनीहरू साप्पोरोका नागरिकहरू भन्दा पर्यटकहरूको लागि समुद्री खाना बेच्छन। Nijo बजार सम्म, तपाईं Odori पार्क बाट हिंड्न सक्नुहुन्छ। तपाईं मौके मा sashimi को रूपमा किनेको माछा खान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सुशी र समुद्री खानाको कटोरा जस्ता रेस्टुरेन्टहरू पनि छन्। त्यसोभए, यदि तपाईं बिहानको खाजा वा खाजाको लागि नयाँ समुद्री खाना खान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ओडोरी पार्कबाट यस बजारमा हिंड्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्य १००० येनदेखि 1000००० येन हो।
मिनामी--जो ~ हिगाशी १-चोम, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ०० - १:7:०० (पसल), :00:०० - २१:०० (रेस्टुरेन्ट) = यो स्टोरमा निर्भर गर्दछ
Closing बन्द हुने दिन ／ कुनै पनि होइन
तनुकीकोजी शपिंग आर्केड
तनुकादोजी किनमेल क्षेत्र आर्केडले कभर गरेकोमा, तपाईं जाडोमा स्वतन्त्र किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ
तनुकीकोजी शपिंग आर्केड सपोरोको सबैभन्दा पुरानो किनमेल सडक मध्ये एक हो। यो Odori पार्क देखि एक सानो पैदल दूरी छ। पूर्व र पश्चिममा करिब meters ०० मिटर लामो लामो शपिंग सडकमा करीव २०० स्टोरहरू खुला छन्।
यो किनमेल क्षेत्र मा एक आर्केड छत छ, तपाईं कडा घाम बिना गर्मी मा किनमेल को आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। जाडोमा हिउँको कुनै प्रभाव छैन। यो एक पैदल यात्री मात्र आर्केड छ, ताकि तपाईं रमाईलो टहल्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं यस आर्केडको माध्यमबाट हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईंले आइटमहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ। किनभने त्यहाँ विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू छन्, तपाईं यस आर्केडमा खान सक्नुहुन्छ।
मिनामी २ र 2-जो निशि १-chome ~--chome, Chuo-ku, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／ यो स्टोरमा निर्भर गर्दछ
Closing बन्द हुने दिन ／ यो स्टोरमा निर्भर गर्दछ
निक्का ब्यानर विज्ञापनको ल्याण्डमार्कको साथ Susukino जंक्शन। सुसुकिनो जिल्लामा अवस्थित व्यावसायिक भवनहरूको रात दृश्य
सुसुकिनो होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो मनोरञ्जन जिल्ला हो। अवश्य पनि यो टोकियो र ओसाका भन्दा सानो छ, तर रात को जनसंख्या करीव 80,000०,००० छ। त्यहाँ धेरै रेस्टुरेन्ट, पब, आदि छन्।
सार्वजनिक सुरक्षा तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। म त्यो दृश्यको पनि आनन्द लिन्छु जहाँ एक व्यवसायिक व्यक्ति जो सपोरोको व्यापार यात्राबाट आएका थिए एक्लै हिँडिरहेका छन्। महिलाहरू राती एक्लै हिंड्न सक्दछन्।
प्रत्येक फेब्रुअरी, सप्पोरो हिउँ फेस्टिवलमा, सुसुकिनो पनि एक चाड स्थल हो। धेरै हिम प्रतिमा र बरफ प्रतिमा स्थापना र नीयनको रंगमा चमकदार छन्।
मिनामी--जो निशी, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
होक्काइडो विश्वविद्यालय परिसर
होक्काइडो विश्वविद्यालय Furukawa हल = शटरस्टकको दृश्य
होक्काइडो विश्वविद्यालयको क्याम्पस पर्यटकहरूका लागि पनि व्यापक रूपमा खुला छ। धेरै व्यक्तिहरू वसन्त र गर्मीमा हरियो घाँसमा पढ्छन्
जिing्गको रूखहरू अक्टोबरको अन्तमा जीवन्त ढ .्गले रंग गर्न थाल्छ
होक्काइडो विश्वविद्यालयको मुख्य गेट जेआर सप्पोरो स्टेशनबाट-मिनेट पैदल छ। यो विश्वविद्यालय क्याम्पस व्यापक रूपमा नागरिकहरूका लागि खुला छ। यो क्याम्पस आकार करीव १.7 मिलियन वर्ग मीटर छ। यो आश्चर्यजनक चौडा छ।
वास्तवमा, म तपाईंलाई सप्पोरोमा सिफारिस गर्ने सबैभन्दा राम्रो दर्शनीय ठाउँ हो जुन यो विश्वविद्यालय हो। तपाईं यस क्याम्पसमा साप्पोरोको प्रकृति र ईतिहासको पूर्ण आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यस क्याम्पसमा त्यहाँ लन खुला स्थानहरू छन् जहाँ स्ट्रिमहरू बग्दछन् र जिन्कगो रूखहरू छन्। १ th औं शताब्दीमा निर्मित सुन्दर काठको भवन सुरक्षित गरिएको छ। तपाईं वसन्त, ग्रीष्म ,तु, शरद orतु वा जाडो जाँदा तपाईं एक अद्भुत परिदृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। नागरिक र पर्यटकहरूको लागि सूचना कार्यालय पनि छ। तपाईं संग्रहालय याद गर्न सक्नुहुन्न जसले डायनासोर आदि का कंकाल प्रदर्शित गर्दछ। प्रवेश निःशुल्क छ।
>> होक्काइडो विश्वविद्यालय संग्रहालयको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
होक्काइडो विश्वविद्यालय जापानको एक अग्रणी विश्वविद्यालय हो। टोकियो विश्वविद्यालय, क्योटो विश्वविद्यालय, नागोया विश्वविद्यालय, आदि जस्तै, यो जापानमा परम्परागत प्रमुख राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रूपमा व्यापक रूपमा परिचित छ। किन तपाईं शान्त क्याम्पसमा आफ्नो समय खर्च गर्नुहुन्न?
Kita 8-jo Nishi 5-chome, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido, जापान नक्सा
तपाईं कुनै पनि समयमा होक्काइडो विश्वविद्यालय क्याम्पसमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै यो नि: शुल्क छ। त्यहाँ धेरै प्रकाश सुविधा छैन, यो बिहान देखि बेलुका सम्म पैदल लिन योग्य छ। सूचना केन्द्र "एल्म फरेस्ट":: to० देखि १:: ०० सम्म खुल्ला छ, सप्ताहन्तमा। क्याम्पस बन्द हुन सक्छ जब एक स्कूल घटना छ, जब प्रवेश परीक्षा को दिन को रूप मा।
सप्पोरो बियर गार्डन र सप्पोरो बियर संग्रहालय
तपाईं सप्पोरो बियर संग्रहालयमा बियर उत्पादन प्रक्रिया सिक्न सक्नुहुनेछ र तपाईं साप्पोरो बियर गार्डनमा ड्राफ्ट बियरको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ
सप्पोरो बियर गार्डनमा त्यहाँ पाँच रेस्टुरेन्टहरू छन्
सप्पोरोको विशेषता डिश "चंगेज खान"
होक्काइडोमा बियर १ about० बर्षदेखि तयार पारिएको छ। यो बियर बगैचा पुरानो रातो ईंट बियर कारखाना पुनः प्रयोग गरेर संचालित छ। होक्काइडोमा बियर बनाउने परिचय सप्पोरो बियर संग्रहालय पनि नजिक छ।
सप्पोरो बियर बगैचामा त्यहाँ पाँच रेस्टुरेन्टहरू छन्। कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा, तपाईं बियरको साथ सप्पोरो "चंगेज खान" को एक विशेष पकवानको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा यस्तो थाल हो जसले ताजा रम आदिलाई आफ्नो लोहामा भाँडामा पकाउँछ।
यी रेस्टुरेन्टहरूमा, म "केसल" सिफारिस गर्दछु। यो माथिको तस्वीर को एक रेस्टुरेन्ट हो। यो रेस्टुरेन्ट पुरानो भवनमा छ र वातावरण उत्कृष्ट छ। यदि तपाईं बच्चाहरूसँग हुनुहुन्छ भने, म "ट्रोमेल" पनि सिफारिस गर्दछु। यो रेस्टुरेन्ट बुफे शैली हो, चंगेज खान बाहेक, तपाईं सुशी र क्र्याब जति चाहानुहुन्छ खान सक्नुहुन्छ।
सप्पोरो बियर गार्डन पछाडि उही परिवार होटेल क्लबबी सप्पोरो। यद्यपि यो होटल उच्च श्रेणीको होटेल होईन, कोठा जापानको होटेलको रूपमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो छ, र यो बच्चाहरूको साथ यात्रीहरूमा लोकप्रिय छ।
जापानी कानून अन्तर्गत, २० बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूले रक्सी पिउन सक्दैनन्।
डाटा: दुबै साप्पोरो गार्डेन पार्कमा अवस्थित छन्
सप्पोरो बियर गार्डन
हिगाशी -9 -२-१०, किता J जो, हिगाशी-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
☎0120-150-550 （सप्पोरो बियर गार्डन सामान्य आरक्षण केन्द्र）
■ खुल्ने समय ／ ११: ～० ～ २२: ०० 11 अन्तिम आदेश २१::30०）
■ अन्तिम दिन ecDec.31
सप्पोरो बियर संग्रहालय
Kita 7-jo, Higashi 9-chome 1-1, Higashi-ku, सापोरो, Hokkaido, जापान
■ खुल्ने समय ／ ११: ००-२०: ०० (नि: शुल्क यात्रा, १ :11: after० पछि प्रवेश छैन)
Closing बन्द हुने दिन ecDec.31 (अस्थायी बन्द)
त्यहाँ शुल्कको लागि जापानी गाइडका साथ विस्तृत यात्रा पनि छ (सोमवार बाहेक, आरक्षण आवश्यक छ)।
>> सप्पोरो बियर संग्रहालयको आधिकारिक साइट
नाकाजीमा पार्क एक सुन्दर पार्क हो जो सप्पोरोका लागि परिचित छ। तपाईं यहाँ जॉगिंगको पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। जाडो हिउँ दृश्यहरु पनि राम्रो छ
म कहिले काँ नाकाजिमा पार्कसँगैको सप्पोरो पार्क होटेलमा बस्छु र नास्ताको अघि नाकाजीमा पार्क भएर हिंड्नेछु। प्रत्येक चोटि जब म हिंड्छु, म यो पार्क संग सन्तुष्ट छु।
नाकाजीमा पार्क एक परम्परागत पार्क हो जुन १०० भन्दा बढी बर्षसम्म रहन्छ, र क्षेत्र करिब २ 100 हेक्टर छ। पार्कमा, त्यहाँ एक ठूलो पोखरी छ जहाँ तपाईं डुating्गा खेल्न सक्नुहुन्छ, केही ऐतिहासिक भवनहरू, कन्सर्ट हल र यस्तै अरू।
तपाईं शरद inतुमा सुन्दर शरद पातहरू रमाउन सक्नुहुन्छ। जाडोमा, तपाईं क्रस कन्ट्री स्कीइंग अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। पार्कमा स्की उपकरणहरू भाँडामा उपलब्ध छन्।
नाकाजीमाकोएन १, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
☎011-511-3924 (Nakajima पार्क प्रबंधन कार्यालय)
■ खुल्ने समय ／ सबै दिन
Okurayama स्की जम्पिंग स्टेडियम (Okurayama अवलोकन पोइन्ट)
Okurayama स्की जम्पिंग स्टेडियम (Okurayama देखी पोइन्ट) साप्पोरो ओलम्पिकमा प्रयोग भयो। तपाईं लिफ्टमा वेधशाला सवारीमा जान सक्नुहुन्छ र सप्पोरो Okurayama स्की जम्पि st स्टेडियमको शहरको केन्द्र हेर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं जम्पि base आधारको शीर्षमा उभिनुभयो भने, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि जम्पि base आधार कति ढल्केको छ।
वास्तवमा, म उच्च स्थानहरूमा राम्रो छैन। म पहिलो पटक यस जम्पि base बेसको शीर्षमा चढ्दा मलाई अलि डर लाग्यो। म स्की खेलाडीहरूको सम्मान गर्दछु जसले त्यस्तो उच्च स्थानबाट उफ्रिन्छ।
Okurayama स्की जम्पिंग स्टेडियम सप्पोरोको बीचमा कारबाट minutes० मिनेटमा अवस्थित छ। आगन्तुकहरू शिखरमा पुग्छन् खेलाडीहरूले प्रयोग गर्ने लिफ्टहरूको साथ। शीर्ष समुद्री सतहबाट 30०307 मिटर माथि छ। शिखरको अवलोकन डेकबाट तपाई साप्पोरो शहर र ईशकारी मैदान देख्न सक्नुहुन्छ।
मियानोमोरी १२1274, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
☎011-641-8585 (Okurayama सामान्य सूचना केन्द्र)
■ खुल्ने समय ／:: -8०-१-30: ०० (अप्रिल २ – - नोभेम्बर)),:: ०-18-१-00: ०० (नोभेम्बर – - अप्रिल २ 29)
Closing बन्द हुने दिन occasion कहिलेकाँही बन्द हुन्छ
The लिफ्टको राउन्ड ट्रिप ／ 500 येन (वयस्क), y०० येन (प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी वा कम उमेर)
माउन्टको वेधशालाबाट Moiwa तपाईं सुंदर शरद leavesतु पातहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ
Mt.Moiwa = शटरस्टकबाट सप्पोरोको शहर दृश्य
माउन्ट मोइवा हिमाली हो (उचाई 530.9०..5 मीटर) सप्पोरोको बीचबाट km किलोमिटर टाढा। पहाडको शिखरमा अवलोकन डेक रहेको छ, तपाईं साप्पोरो शहर मात्र नभई इशिकारी मैदान र ईशकारी खाडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो वेधशाला युवा जोडीहरूका बीच धेरै लोकप्रिय छ।
पहाडको शीर्षमा, तपाईं रोपवे र एक मिनी केबल कार स्थानान्तरण गर्नुहोस्। तपाईं कार द्वारा दर्शनीय सडकको साथ ड्राइव गर्न सक्नुहुन्छ र मिनी केबल कार लिनुहोस् (यद्यपि हिउँदमा सडक बन्द हुनेछ)। यदि तपाईं यो दर्शनीय सडक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईं एक सुन्दर कुंवारी ज through्गल हुँदै जानुहुन्छ यदि तपाईं गर्मीमा जानुहुन्छ भने, म यो सडक प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु।
माउन्ट मोइवासँग साप्पोरो एल्गाइमा स्की रिसोर्ट पनि छ। यो एक स्की रिसोर्ट हो जुन तपाईं सजिलैसँग सप्पोरो शहरबाट जान सक्नुहुनेछ। दृश्य पनि धेरै राम्रो छ। तपाईं स्की र अन्यमा पनि भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ।
माउन्ट मोइवा सप्पोरोको केन्द्रबाट करिब km किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। यो समुद्री सतहभन्दा 5०..530.9 मिटर मात्र माथिको छ, तर शिखर वेधशालाबाट दृश्य भव्य हो। वेधशालामा पुग्न, तपाईले पहिला पहाडको बीचमा केबल कार वा कार लिनु पर्छ। प्राप्त गर्न ...
डाटा (सप्पोरो माउन्ट मोइवा रोपवे, मिनी केबलकार)
फुशिमी--चूम --5, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／ १०: -10०-२२: ०० (अप्रिल १- नोभेम्बर ,०,अन्तिम २१::21० अप), ११: ००-२२: ०० (डिसेम्बर १ - मार्च 30०, अन्तिम २१::11० अप) ／ ११: ० 00-१-22: ०० (डिसेम्बर ,१, अन्तिम १:00::1० अप) ／:: ००- १:30:०० (जनवरी १, अन्तिम १:21::30०)
Closing बन्द दिन November नोभेम्बरमा करीव १ days दिनको लागि बन्द
The रोपवे र मिनी केबलकारको राउन्ड ट्रिप ／ १1,700०० येन (वयस्क), 850० येन (प्राथमिक विद्यालय वा कम)
ईसेमु नोगुची, सप्पोरो द्वारा डिजाइन मोरेनुमा पार्क
आकाशबाट Moerenuma पार्क शट। यदि तपाईं यो तस्वीर हेर्नुभयो भने तपाईं जमीनमा मूर्तिकलाको अवधारणा बुझ्न सक्नुहुन्छ
"Moerenuma" साप्पोरोको बाहिरी भागमा एक दलदल हो। जे होस्, यो फोहोरको ल्यान्डफिल भयो र मानिसलाई चोट पुर्‍यायो। यस जग्गाको पुनर्जन्म गर्न, पार्क १ 1982 .२ मा निर्माण गर्न शुरू भयो। र २०० 2005 मा करीव १ 190 ० हेक्टर क्षेत्रफलको विशाल पार्क पूरा भयो।
ईसामु नोगुची एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हो। उनले यस पार्कलाई पृथ्वी मूर्तिकलाको अवधारणाको साथ डिजाइन गरे। पार्कमा माथि चित्रमा Moelle पर्वत छन्, कांचको पिरामिड, 48 मीटर को व्यास संग झरना पोखरी। वसन्त 2600तुमा, २her०० चेरी फूलहरू फूल्छन्। जाडोमा, तपाईं क्रस कन्ट्री स्कीइंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ। भाडा स्की पनि उपलब्ध छ।
मोरेनुमा-कोएन १-१, हिगाशी-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
☎011-790-1231 (जापानी मात्र)
■ खुल्ने समय ／:: ००-२२: ०० (पार्क प्रवेशद्वार २१:०० मा बन्द छ)
शिरोइ कोइबिटो पार्क
शिरोइ कोइबिटो पार्क एक मीठो थीम पार्क हो जहाँ तपाई "शिरोइ कोइबिटो" को निर्माण प्रक्रिया देख्न सक्नुहुनेछ।
"शिरोइ कोइबिटो पार्क" मा तपाईं खुशीसाथ मिठो कसरी बनाउने भनेर जान्न सक्नुहुन्छ
के तपाईंलाई "शिरोइ कोइबिटो" नामको पेस्ट्री थाहा छ? शिरोइ कोइबिटो होक्काइडोको प्रतिनिधि मीठा हो र प्राय: स्मारिकाको रूपमा किन्छ। यो ल्यागु डि च्याटमा मिठो स्यान्डविचिंग चकलेट हो (एक प्रकारको कुकी)। "शिरोइ कोइबिटो" को अर्थ जापानीमा "सेतो प्रेमी" हो, यदि सीधा अनुवाद गरियो भने।
"शिरोइ कोइबिटो पार्क" एक थिम पार्क हो जुन १ 1995 2019 in मा खोलेको थियो जुन एक कम्पनीले यो मिठो बनाउँदछ। यस पार्कमा तपाईले शिरोइ कोइबिटोको उत्पादन लाइन देख्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, तपाईले ठूलो शिरोइ कोइबिटो बनाउने अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ (उत्पादन लाइनको टुर कुना नविकरण अन्तर्गत छ, दुर्भाग्यवस हामी मे २०१ XNUMX को अन्त्यसम्म भ्रमण गर्न सक्दैनौं)।
यस बाहेक, त्यहाँ एक अंग्रेजी शैली बगैचा "रोज गार्डन" छ जहाँ १२० प्रकारका गुलाब फूलेको छ। त्यहाँ सुन्दर छत पेन्टि and र ग्लासवेयर सहित प्रदर्शनी फ्लोरहरू पनि छन्। रोशनी पनि राम्रो छ। परी कथा विश्व राम्रोसँग निर्मित छ, र यो युवा जोडीहरू र बच्चाहरूको साथ धेरै भीड हो। कोठामा प्रदर्शन मुख्य हो, यो जाडो मा पनि आधा दिन को लागी पर्याप्त मजा लिन सकिन्छ।
मियानोसावा २-जो २-चोम, निशि-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
मारुयामा पार्कमा प्राकृतिक खजाना फैलाउने आदिम जंगल छ, सप्पोरो
मारुयामा पार्क एक विशाल पार्क हो जसको साइट क्षेत्र 70० हेक्टर छ। पार्कको छेउमा, त्यहाँ Maruyama चिडियाखाना र होक्काइडो Jingu मन्दिर छ, र यो गहिरो primeval जंगल मा जारी छ।
टोकियोमा पार्कहरूको तुलनामा, मलाई लाग्छ कि मारुयामा पार्क रूखहरूमा ठुलो र ज in्गलको गहिरो छ। प्रत्येक चोटि जब म यो पार्क भ्रमण गर्छु, म होक्काइडोमा प्रकृतिको आकार महसुस गर्दछु।
पार्कमा बेसबल स्टेडियमहरू, टेनिस कोर्टहरू र ट्र्याक र फिल्ड स्टेडियमहरू पनि छन्। मेमा, चेरी फूलहरू धेरै खिलिरहेका छन् र मानिसहरूले भीड।
मियागाओका, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
मारुयामा चिडियाखानामा पोलरको आमा बुबा र बच्चा
यदि तपाईं होक्काइडोको कुनै चिडियाखानामा जान चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई असहिकावाको असाहिमा चिडियाघर जान दृढताका साथ सिफारिस गर्दछु। Asahiyama चिडियाखाना मा, जनावरहरु धेरै ऊर्जावान र हामीलाई रमाइलो छन्। जे होस्, जब यो ध्रुवीय भालुको कुरा आउँछ, सायद यस मारुयामा चिडियाखानामा ध्रुवीय भालुहरू असाहिमा चिडियाघर भन्दा बढी जोसिलो हुन सक्छ। मारुयामा चिडियाखानामा पोखरीमा पौंडी पोल्स धेरै सक्रिय हुन्छन् र बच्चाहरू रमाउँछन्।
मारुयामा चिडियाखाना चौडा छ। पछाडि एक विशाल आदिम जंगल पनि छ। तपाईं शान्त र जनावरहरू भेट्न सक्षम हुनुहुनेछ। हाल, त्यहाँ लगभग २०० प्रकारका जनावरहरू छन् जसमा ध्रुवीय भालु, पेन्गुइन, सिंह, हात्ती, जिराफ इत्यादि छन्।
-3-१ मिआगाओका, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: -9०-१-30: (० (मार्च-अक्टुबर, १:16:०० पछि प्रवेश छैन),:: -30०-१-16: ० (नोभेम्बर-फेब्रुअरी, १:00::9० पछि प्रवेश छैन)
Closing बन्द हुने दिन every प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो बुधवारमा (छुट्टीको मामलामा अर्को दिन) April अप्रिल र नोभेम्बरमा प्रत्येक १ हप्ताको लागि बन्द हुन्छ
Entrance प्रवेश शुल्क ／ 600 येन (वयस्क), नि: शुल्क (जुनियर हाई स्कूल अन्तर्गत)
होक्काइडो श्राइन एक ठूलो मन्दिर होक्कैडो, सप्पोरोको प्रतिनिधित्व गर्ने
होक्काइडो मन्दिर होक्काइडोको अग्रणी मन्दिर हो। सप्पोरो नागरिकहरू प्रायः नयाँ वर्षको दिन र बच्चाहरूको लागि उत्सवहरू हेर्न आउँदछन्।
सीमा धेरै ठूलो छ। यो ज forest्गलमा छ, र एक भव्य वातावरण बगिरहेको छ। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ तपाईंले एउटा गिलहरी पाउनुहुनेछ।
मेमा धेरै चेरी फूलहरू खिलछन् र धेरै मानिसहरू हेर्न आउँदछन्। किनकि यो मारुयामा पार्क र मारुयामा चिडियाखानाको नजिक छ, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि यी ठाउँहरूको वरिपरि घुम्न।
474 XNUMX मियागाओका, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ०-7-१-00: ०० (नोभेम्बर-फेब्रुअरी),:: ०-16-१-00: ०० (मार्च),:: ०-7-१-00: ०० (अप्रिल-अक्टुबर) ／ ०: ०-17-१-00: ०० (जनवरी १),:: ०-6-१-00: ०० (जनवरी २- 17-00),:: ०-0-१-00: ०० (जनवरी --19)
Horomitoge लैवेंडर गार्डन (सप्पोरो ल्याभेन्डर फार्म)
होरोमिटेज, सप्पोरोमा सुन्दर लैभेंडर क्षेत्रहरू
यदि तपाईं गर्मी मा होक्काइडोमा ल्याभेन्डर क्षेत्रहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं फुरानो जानु पर्छ। जहाँसम्म, साप्पोरोबाट फुरानो सम्म कारहरूको लागी दुई घण्टा लाग्छ। यसको विपरित, होरोमिटोज साप्पोरोको बीचबाट केवल 30० मिनेटको ड्राइभमा छ। होर्मोटेज मानिसहरू बीच लोकप्रिय छ जो लैभेंडर फिल्ड सजीलो हेर्न चाहान्छ।
होरोमिटिज एक उत्कृष्ट वेधशाला पनि हो जुन सप्पोरो शहरको केन्द्रमा हेर्नका लागि हो। "होरो" शब्द सपोरो छोड्ने शब्द हो। "Mi" भनेको हेर्नु हो। "Toge" भनेको पास हो। होरोमिटिज स्थानीयलाई साप्पोरो हेर्नका लागि परिचित छ।
471 110१-११० बाँकेई, चुओ-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
☎011-622-5167 (लैभेंडर गार्डन = Yumekobo सातो)
■ अन्तिम दिन ／ डिसेम्बर १- मार्च 1०
■ प्रवेश शुल्क Car कार्गेको निःशुल्क ／ पार्कि／ स्थलको उपयोग १ कार -००-1०० येन हो
■ खुल्ने समय ／:: -9 00-१-17: ००
■ खुल्ने दिन ／ मध्य जुलाई देखि अगस्टको सुरूमा
■ प्रवेश शुल्क Car कार्गबाट ​​निःशुल्क ／ पार्कि lot स्थलको उपयोग १ कार y०० येन हो
जोप्पान्की ओन्सेन सप्पोरो बाहिरको सुन्दर उपत्यकामा
सप्पोरो शहरमा तातो स्प्रि withहरू सहित होटलहरू छन्। उदाहरण को लागी, JR टावर होटल निक्को सप्पोरो JR सप्पोरो स्टेशन को स्टेशन भवन मा, तपाई रमाईलो तातो स्प्रिंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाई जापानी तातो स्प्रि more अझ गम्भीरताका साथ अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि जोप्पान्की ओन्सेनलाई सप्पोरोको बाहिरी भागमा जान दिनुहोस्। जोजान्की ओन्सेन एक तातो वसन्त शहर हो जुन टोयोहिरा नदीको किनारमा विकसित भयो। जोजान्की ओन्सेनमा पूर्ण-तातो स्प्रि withहरू रहेका धेरै होटलहरू छन्।
यसको लागी १ घण्टा सिप्पो स्टेशनको बस टर्मिनलबाट जोजान्की ओन्सेन बाट सिधा बस जान्छ। सप्पोरोका मानिसहरूले तातो स्प्रि useहरू जोजान्कीमा प्रयोग गर्छन् जब तिनीहरू पुनःताजा गर्न चाहन्छन्।
जोजान्की ओन्सेनमा नदीको किनारमा पैदल पथहरू विकास भइरहेको छ। धेरै मानिसहरू शरद leavesतुमा यस हिड्ने मार्गमा हिड्ने बेला शरद पातहरूको आनन्द लिन्छन्। नदीमा रातो निलम्बन पुल शूटिंग स्थलको रूपमा भीडले भरिएको छ।
जोजान्की ओन्सेन हग्गाशी--चोम, मिनामी-कु, सप्पोरो, होक्काइडो, जापान नक्सा
☎011-598-2012 (जोजानकी टुरिस्ट संघ)
सप्पोरो सहर माउन्टको वेधशालाबाट देखियो। मोइवा
नोभेम्बरदेखि मध्य मार्चसम्म, सप्पोरो शहर सुन्दर रोशनीको साथ सजाइएको छ
होक्काइडो सरकारको पूर्व मुख्य भवन वरिपरि सुन्दर रोशनी
ओडोरी पार्क, सप्पोरो = शटरस्टकमा क्रिसमस बजार
ओडोरी पार्कमा विशाल हिम छवि सेट गरियो जब सप्पोरो हिउँ फेस्टिवल, सप्पोरो
माउन्टमा Moiwa तपाईं स्कीइ,, सप्पोरोको पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ
यदि तपाईं जाडोमा सप्पोरो जानुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु तपाईं फेब्रुअरीको पहिलो आधामा जानुहोस् जब प्रसिद्ध "सप्पोरो स्नो फेस्टिवल" आयोजना गरिन्छ। यस चाडमा ओडोरी पार्कमा धेरै हिउँका मूर्तिहरू राखिएका छन्, र हिउँ र बरफ छविहरू पनि सुसुकिनोमा व्यवस्थित छन्।
प्रत्येक वर्ष, संसारभर बाट २ लाख आगन्तुकहरु यस चाडमा भेला हुन्छन्। यस कारणका लागि तपाईले होटल र हवाइजहाजहरू सकेसम्म चाँडो बुक गर्नु पर्छ।
>> सप्पोरो हिउँ महोत्सवको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
यदि तपाईं होटेल बुक गर्न सक्नुहुन्न भने यस फेस्टिवल बाहेक अन्य समयमा सप्पोरो जानेबारे सोच्नुहोस्। जाडोमा सप्पोरो यस अवधि बाहेक धेरै आकर्षक छ। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बरदेखि मध्य मार्चसम्म, सप्पोरो शहर सुन्दर रोशनीको साथ सजाइएको छ। प्रत्येक वर्ष क्रिसमसको मौसममा ओडोरी पार्कमा क्रिसमस मार्केट खोलिन्छ।
यदि तपाइँ जाडोमा सप्पोरो भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु सप्पोरोको सहरको क्षेत्र माउन्टको अवलोकन डेकबाट हेर्न। मोइवा वा ओकुरायामा। हिउँले कभर गरिएको शहर दृश्य एकदमै सुन्दर छ। जे होस्, यो धेरै चिसो छ, त्यसैले आफ्नो कोट र ग्लोभ्स नबिर्सनुहोस्।
तपाईं माउन्टमा स्कीइ enjoyको पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। मोइवा। विवरणका लागि तल साप्पोरो मोइवेमा स्की रिसोर्टको आधिकारिक साइट हेर्नुहोस्।
>> सप्पोरो मोइवामा स्की रिसोर्टको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
मारुयामा पार्क सप्पोरोको सर्वश्रेष्ठ चेरी फूलहरूमा एक भनिन्छ
तपाईं होक्काइडो तीर्थमा शानदार चेरी फूलहरूको कदर गर्न सक्नुहुन्छ
सप्रोरोमा वसन्त variousतुमा विभिन्न ठाउँहरूमा ताजा हरियो व्यक्तिहरूको मन धोयो
टोकियो र ओसाकामा चेरी फूलहरू मार्चको अन्तदेखि अप्रिलको शुरुमा प्रत्येक वर्षमा देखिन्छन्। यद्यपि, सप्पोरोमा, चैरी फूलहरू लगभग अप्रिलको अन्त्यमा, मेको सुरूवातमा फूल्छन्। यस तरिकाले, मौसम जब पूर्ण शरीर वसन्त सप्पोरोमा आउँछ टोकियो र ओसाकाको तुलनामा एकदम ढिलो छ। वसन्त को वातावरण अप्रिल को दोस्रो आधा देखि एक स्ट्रोक मा बहाव को शुरू हुन्छ, र यो फूल र ताजा हरियो मई देखि जून को आनन्द लिन सम्भव हुनेछ।
यदि तपाईं सप्पोरोमा चेरी फूलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि मरुयमा पार्कमा जानुहोस्। यस पार्कमा १ 150० भन्दा बढी चेरी फूलहरू छन्। मारुयामा पार्क नजिकै अवस्थित होक्काइडो जिंगु तीर्थ चेरी फूलका लागि पनि प्रसिद्ध छ।
सप्पोरो बेरमा प्रत्येक बर्ष लगभग समान समयमा चेरी फूल जस्तै खिलिन्छ। टोकियो र ओसाका प्लमहरू चेरी फूल भन्दा पहिले नै खिलछन्, तर जाडो होक्किडो मा लामो छ, जब वसन्त आउँछ, यो एकै समयमा खिलिन्छ। त्यसो भए, एकै समयमा चेरी फूलहरू र प्लमहरूको मजा लिनुहोस्!
मेदेखि जुन सम्म रूखहरू र घाँसहरू साप्पोरो शहरका विभिन्न भागहरूमा स्थिर रूपमा बढ्न थाले, ताजा हरियो सुन्दर छ। म होक्काइडो युनिभर्सिटी, नाकाजिमा पार्क, मारुयामा पार्क, इत्यादि वरिपरि हिंड्न सिफारिस गर्दछु।
होरोमिटोजको लैभेंडर क्षेत्रहरू। Horomitoge बाट साप्पोरो शहरलाई बेवास्ता गर्न पनि सम्भव छ
Maeda वन पार्क को धेरै सुन्दर प्रामाणिक वन छ
सप्पोरोको ओडोरी पार्कमा बियर बगैचा हरेक वर्ष जुलाईको अन्तदेखि अगस्टको बीचसम्म खुल्ला रहन्छ
सप्पोरोको ओडोरी पार्कमा, बोन ओडोरी (जापानी शैलीको नृत्य) महोत्सव अगस्तको मध्यमा करीव एक हप्ताको लागि आयोजित गरिनेछ
यदि तपाइँ गर्मीमा होक्काइडोमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाई केवल साप्पोरो मात्र होइन, अन्य पर्यटन गन्तव्यहरू पनि घुम्न सक्नुहुन्छ। ग्रीष्म Inतुमा, मैदानमा धेरै फूलहरू फूल्छन्। तापक्रम अपेक्षाकृत न्यानो छ किनकि तपाईं अन्य हावाहरूमा जान नसक्ने उच्च पहाडहरूमा जान सक्नुहुन्छ। होक्काइडोमा त्यहाँ धेरै अद्भुत दर्शनीय स्थलहरू छन्, त्यसैले कृपया धेरै आनन्द लिनुहोस्।
सप्पोरोमा, "सप्पोरो समर फेस्टिवल" हरेक वर्ष जुलाईको मध्य देखि अगस्टको बीचमा आयोजित हुनेछ। यस अवधिमा बियर बगैचा हरेक साँझ ओडोरी पार्कमा खुला रहनेछ। बोन ओडोरी (जापानी शैलीको नृत्य) को महोत्सव अगस्तको मध्यमा आयोजित हुनेछ।
गर्मीमा, विभिन्न पार्क र सप्पोरोको बाहिरी भागमा पर्यटकीय भीडहरू छन्। Horomitoge मा, सुन्दर लैभेंडर खिल्यो। माेडा वन पार्कमा, तपाईं पूर्ण रूपमा वन नुहाउन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यो छायाको केही छायाको साथ पार्कमा घमाइलो दिनमा एकदम तातो हुन सक्छ।
अक्टुबरमा, तपाईं सफोरो शहरको विभिन्न भागहरूमा शरद पातहरू रमाउन सक्नुहुन्छ
रंगीन शरद pleतु म्यापल पातहरू होक्काइडो युनिभर्सिटीमा = शटरस्टकमा
तपाईं साप्पोरो बाहिर जोोजान्कीमा पनि सबैभन्दा सुन्दर शरद leavesतुका पानाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ
होक्काइडोमा, शरद ofतुको स August्केतहरू अगस्टको अन्ततिर बग्न थाल्नेछ। यो दिनको समयमा अझै तातो हुन्छ, तर बिहान र साँझ अलि अलि चिसो हुँदै जान्छ। र सेप्टेम्बरमा, पूर्ण शरद highतु उच्च पहाडहरूमा आउँनेछ। होक्काइडोको पहाडहरूमा जस्तै डेसेट्सुजान, शरद leavesतुका पातहरू जोशका साथ आउँनेछन्। र अक्टुबरको अन्तमा, शरद पातहरू पूरै मापन हुनेछ साप्पोरो शहरमा पनि। नोभेम्बरको उत्तरार्द्धमा सप्पोरोमा हिउँ पर्न थाल्छ। जहाँसम्म यो समय छोटो छ, साप्पोरो सहर सुन्दर शरद leavesतुका पातहरूले रंगिएको छ।
यदि तपाईं वेधशालामा जानुहुन्छ जस्तै माउन्ट। Moiwa र Okurayama स्की जम्पिंग स्टेडियम, तपाईं सुन्दर शरद leavesतु पातहरू देख्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यदि तपाईं शरद leavesतुको पातहरू रमाईलोको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि जोप्पान्की ओन्सेनलाई सप्पोरोको बाहिरी भागमा जान दिनुहोस्। शरद winterतुदेखि जाडोसम्म, धेरै तातो स्प्रि manyहरूमा धेरै मानिसहरू बसिरहेका हुन्छन्। जोजान्कीका राम्रा होटेलहरू पनि लोकप्रिय छन् त्यसैले तिनीहरू छिट्टै नै बुक हुनेछन्। त्यसोभए होटल जतिसक्दो चाँडो बुक गर्नुहोस्।